Tilmaamayaasha ugu Fiican ee Dib u Noqoshada | vfxAlert official blog
Tilmaamayaasha isbeddelka isbeddelka
Kuwa bilowga ah
Ganacsade kasta wuxuu rabaa inuu soo galo suuqa meel u dhow barta dib u noqoshada maxaa yeelay waa xaalad waajib ku ah ganacsiga waxtarka u leh hanti kasta. Joogtaynta booska inta ay lagama maarmaan u tahay isbeddelka weyn iyo gaaritaanka meesha ugu sarreysa waa hawl adag laakiin lagu guuleysan karo. Waxa ugu muhiimsan waa in laga faa'iideysto tilmaamayaasha saxda ah ee istiraatiijiyada ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee dib u noqoshada iyo saxda ah.
Sida loo aqoonsado isbedelka
Dhibaatada ugu weyn ee istiraatiijiyad kasta maahan tusaalooyinka iyo tilmaamayaasha ganacsiga, waa cilmu-nafsiga aadanaha. Ganacsade kasta wuxuu leeyahay aragti shaqsiyeed xaaladda suuqa: marka isbeddelku bilowdo ama dhammaado ama marka ay jirto dib u noqosho oo aan ahayn sixitaanka qiimaha. Baadhitaanka sida calaamadaha u shaqeeyaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah , in saadaal kasta lagu fuliyo tafaasiisha taariikheed, taas oo macnaheedu yahay dib u dhaca lama huraan.
Aynu tixgelinno isbeddelka dhaqdhaqaaqa qiimaha jihada, kuwaas oo leh qiimeyn tirakoob oo ku saabsan waqtiga .
Si kale haddii loo dhigo, 2-3 laambadood oo hal dhinac u dhigma cabbirka 10-15 dhibcood oo loogu talagalay in lagu xoqo M1-M5 waa isbeddel muuqda, ganacsiga muddada-dhexe wuxuu u baahan yahay dhaqdhaqaaq xoog leh dhowr saacadood. Tilmaame kasta oo dib u noqosho leh wuxuu leeyahay qiimeyntiisa daahida hababka ay ula shaqeeyaanna way ku kala duwan yihiin xaalad kasta.
Maxay u qaadataa qiimo lulid
Maaddaama cilmu-nafsiga suuqyada uu sheegayo, dib-u-noqoshada dhaqdhaqaaqa sicirka ayaa muujinaya isbeddel ku yimaada dheelitirka u dhexeeya dibi iyo bears. Warar muhiim ah iyo tirakoob ayaa beddeli kara isbeddellada. Hawsha ugu weyn ee tilmaamayaashaani waa in la helo isbeddelladan isbeddelka ah.
Saddexda marxaladood ee dib u noqoshada suuqa :
1. Dib u soo celinta iyo burburka ayaa ku soo dhowaanaya aagagga qiimaha iyo heerarka muhiimka ah. Tani waxay noqon kartaa xarriiqda dhammaadka, taageerada, iska caabinta, ugu badnaan iyo ugu yar, ama soohdinta kanaalka;
2. Qiimaha waa in lagu hagaajiyaa kor ama ka hooseeya heer cayiman. Way fiicnaan lahayd haddii tani dhacdo dhowr jeer (ugu yaraan laba) dib-u-eegisyo;
3. Laba qodob oo hore ayaa la dhammaystiray, waxaana jira dhaqdhaqaaq xooggan oo ka dhan ah janjeerkii hore.
Wareega koowaad kadib, ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa inuu qiimeeyaa inta ay le egtahay isku-darka suurtagalka ah, illaa isku-dheelitirka awoodaha suuqa isbeddelayo. Kadib dhammaystirkiisa, waxaad u baahan tahay inaad furto mid cusub ama aad hagaajiso natiijada heshiiska hadda jira.
Waa maxay dib u noqoshada? Waa isbeddel ku filan "ballaadhan", oo aan ka yarayn 20-30% ee isbeddelka heerka ee 7-10 maalmood ee la soo dhaafay. Haddii boqolkiiba ay ka yar yihiin, waa uun dib u soo celin maxalli ah ama sixitaan oo dhakhso ku dhammaan doona.
Xusuusnow, in ay jiraan lahayn waa tilmaame farsamo wax quudiya damaanad ah saxda ah ee isku halaynta of signal ah. Si kastaba ha noqotee, haddii dhaqdhaqaaqa ka soo horjeeda uu aad u dheer yahay oo xoog badan yahay, kalsoonida dhaqdhaqaaqa cusub ayaa noqon doona mid sareeya .
Waxaan u baahanahay inaan la socono mugga suuqa maxaa yeelay markii dhaqdhaqaaqa cusubi soo muuqdo, way sii kordhi doonaan. Way kafiican tahay in la fiiriyo mugyada aan sax ahayn (dhabta ah) ee mustaqbalka iyo xulashooyinka. Ganacsatada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waa inay raacaan kuwa suuqa sameeya ama suuqa wuxuu si deg deg ah ugu laaban doonaa raxan raxan ama dhaqdhaqaaqii hore.
Ujeedada ugu weyn ee tilmaamayaasha dib u noqoshada:
Bixi macluumaadka kaliya ee ku saabsan sixitaanka muhiimka ah iyo dib u celinta;
Sii daahitaan yar ganacsadaha.
Iyadoo aan loo eegin xuduudaha iyo hababka xisaabinta, hawsha ugu weyn ee dhammaan calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah waa inay muujiso dhammaadka isbeddelka hadda socda .
Tilmaamayaasha Taxanaha Aasaasiga ah
Qalabka ugu caansan ee falanqaynta farsamada waa Celceliska Dhaqdhaqaaqa (MA). Tilmaamahan wuxuu noo ogolaanayaa inaan saadaalino dhaqdhaqaaqa mustaqbalka ee qiimaha salka ku haya booskiisa oo u dhow xariiqa tilmaame: hoose iibka (Iib), ka sareeya iibsiga (Iibso). Dib u noqosho suurtagal ah ayaa ku taal burburka.
Inta lagu jiro abuurista istiraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, waa inaad xusuusataa in celceliska qiimaha uu muujinayo kaliya isbeddelka adag ee cad. Heshiisyo faa iido leh iyo heshiisyo waqti-gaaban ah ayaa laga dheehan karaa waxyaalo gaagaaban. Taasi waa sababta ay ugufiican tahay in loo adeegsado habka soo socda: isticmaal MA waqtiyo badan ("Dheer" Dhexdhexaad Dheer) falanqeyn guud iyo "gaaban" si loo shaandheeyo calaamadaha.
Haddii aad rabto inaad magdhaw ka bixiso dib u dhaca, isticmaal dhowr celcelis oo leh kala duwanaansho iyo waqtiyo kala duwan, tusaale ahaan, heerka Alligator ee Bill Williams, kaas oo si hufan ugu shaqeynaya wax kasta oo hanti ah .
Isla algorithm ayaa lagu dabaqayaa Parabolic SAR (PSAR). Laakiin xaaladdan marka la eego isbeddelka isbeddelka ayaa la dhigayaa jabinta khadka tilmaamaha. Marka la barbardhigo MA, tilmaamahan isbeddelku wuxuu bixiyaa calaamado badan oo been abuur ah oo ku saabsan waxqabadyada mala awaalka ah ee sameeyayaasha suuqa. Way adkaan kartaa in la helo isbeddelka noocaas ah ee xaaladda laakiin waad ku garan kartaa iyaga adoo adeegsanaya qaababka garaafka iyo oscillators. Nooca caadiga ah ee 'PSAR' wuxuu leeyahay sumcad xun sida dib-u-habeyn, laakiin waxaa jira wax ka beddello ku filan iyada oo aan laga hadlin arrintan !
Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa inuu fiiro gaar ah u yeeshaa shumacyada Heiken Ashi. Kani waa tilmaame ka-soo-noqosho shumaca iftiinka shumaca, kaas oo inta badan lagu isticmaalo suuqa saamiyada. Si kastaba ha noqotee, Heiken Ashi wuxuu sidoo kale ku noqon karaa mid faa'iido u leh suuqa Forex ee ku saabsan waqtiyada sare iyo heshiisyada muddada-dhexe. Waxaa loo muujiyey sida shaxda laambadda la beddelay. Suuqa "sawaxanka" waa halkii la sifeeyay, isbeddel ayaa la arkay, shumacyo ayaa midabkooda ku beddelaya meelaha muhiimka ah. Looma adeegsan karo waqtiga kooban sababta oo ah dib u dhaca weyn!
Muddooyinka fidsan (dhaqdhaqaaqa dambe) xilliyada ay saxnaanta calaamadaha MA hoos u dhaceyso, waxaa jira qalab qalafsan sida tusaha dib-u-celinta Ichimoku Kinko Hyo, kaas oo bixiya suurtagalnimada in laga ganacsado dib-u-soo-kabasho ka timaadda xuduudaha dhinacyada kala duwan waxayna xaqiijineysaa burburka.
Qaababka dib u noqoshada sawirka
Qaababkan laambadda waxaa loo sameeyay istiraatiijiyad bilaash ah oo tilmaamaysa Qiimaha Waxqabadka. Iyagu waa nooca ugu horumarsan ee qaababka shumaca caadiga ah. Falanqaynta qaababka garaafka ah ee ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay newbie's marwalba way adagtahay. Awoodda lagu aqoonsado nalka laambaddu wuxuu la yimaadaa waqti iyo waxqabad iyo waqtiyo yar yar, ficil ahaan ma shaqeynayo. Laakiin haddii aad kormeerto dhaqdhaqaaqa mugga, markaa waa suurtagal in si wax ku ool ah loo sifeeyo moodooyinka aan degganeyn. Heshiisyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa muddada-dheer ah, inta badan tilmaamayaasha dib u noqoshada waxaa looga shaqeeyaa habka saxda ah.
ZigZag waa aalad la maareeyay oo sax ah si loo aqoonsado dhacdada muhiimka ah. Tani waxay noqon kartaa dib-u-noqosho run ah, saxitaan, dib-u-celin muddo-gaaban ah, dhiirigelin mala-awaal ah. Tilmaamuhu wuxuu leeyahay dib-u-habeyn, laakiin aagagga "la dhammaystiray" waxay bixiyaan heerar taageero / caabbinta oo wanaagsan iyo, sida lagu caddeeyey ficil ahaan, mustaqbalka, qiimaha ayaa sameeya ugu yaraan mid ka mid ah dib-u-tijaabintooda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal dhibaato. Dejinta ZigZag waxay u baahan tahay in si joogto ah wax looga beddelo isbeddelka hadda jira, ama qaabku wuxuu noqon doonaa mid aad u deggan.
Tilmaamayaasha dib u celinta kanaalka iyo kicinta
Suurtagalnimada dib u noqoshada isbeddelka ayaa kordheysa marka qiimaha uu ku soo dhowaado xudduudaha kanaalka ama dhexda. Caadi ahaan, calaamadaha lagu kalsoonaan karo waxay bixiyaan wadiiqooyin firfircoon. Laakiin ha iloobin sharciga ugu muhiimsan ee ganacsiga ganacsiga binary: jabinta ama calaamadaha dib u noqoshada waa in lagu xaqiijiyaa qalab kale. Kaydka "koorsada" waxaa lagu qeexay tilmaamayaasha balaaran ee kanaalka ee isbedelka iyo xawaaraha suuqa (ATR, Momentum).
Ereyga "pulse" waxaa loola jeedaa dhamaan noocyada oscillators, badiyaa waa la iibiyay / dib loo iibiyay. Iyada oo ay la socdaan calaamado xoog badan oo xoog leh oo loogu talagalay dib-u-noqoshada ama sii wadista u janjeera waxay noqon doontaa kala duwanaansho dhaqdhaqaaqa garaafyada qiimaha iyo taariikh-dhaqameedka tilmaamayaasha (kala-duwanaanta), burburka heerarka celceliska waxaad ku dari kartaa mugga si aad u furato ganacsiyada. Fiiro gaar ah u yeelo in kala duwanaanshuhu muhiim u yahay oo keliya jadwalka waqtiga H1 iyo wixii ka sarreeya !
Iyadoo aan loo eegin waxa xallinta ay adeegsatay tilmaamayaasha dib-u-celinta (CCI, RSI, Stochastic), daqiiqadaha caadiga ah ee burburka khadadka ama gelitaanka aagga ba'an ayaan dammaanad ka qaadi doonin dib u noqoshada noocaas ah. Isbeddelku wuxuu sii socon doonaa muddo dheer iyadoo "lagu dhejinayo" oscillator-ka xad-dhaaf ah / xad-dhaaf ah, ficil kasta oo ay sameeyaan kuwa suuq geyntu waxay si dhakhso leh u horseedi kartaa hagaajinta oo dib u bilaabi kartaa dhaqdhaqaaqa. Haddii aad aragto soo laabashada bartamaha, tan waxaa loo qaadan karaa inay tahay calaamadda. Si kastaba ha noqotee, inta badan tani waa fursad kaliya oo lagu arko isbeddel soo ifbaxaya .
Dhammaan isku-darka MACD ama wax-ka-beddelka oscillators-ka ee leh xilliyo kala duwan iyo dejinno ayaa bixiya xog sax ah oo lagu ogaanayo isbeddellada. Tusaale:
Qallafsanaan (5,3,3) + Stochastic (21, 9, 3).
Haddii tirada calaamadaha beenta ahi aysan yarayn, la shaqee kooxda xigta ee tilmaamayaasha. Tani waa istaraatiijiyad durba murugsan oo ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah.
Tilmaamayaasha dib u celinta isku dhafan
Jiilal dhawr ah oo ganacsato ah ayaa adeegsanayay tilmaamayaasha aasaasiga ah sidaa darteed way adag tahay in la helo isku-darka cusub. Taasi waa sababta ay lagama maarmaanka u tahay in lagu dhaqmo hababka aan caadiga ahayn. Xaaladahaas oo kale, ganacsatadu waxay adeegsadaan kumbuyuutar kumbuyuutar oo falanqeynaya xaaladda suuqa waxayna ku deeqaan dhowr nooc oo istiraatiijiyad ah.
Faa'iidada xigta waa shaashadda terminalka. Mararka qaarkood ganacsaduhu wuxuu arkaa tilmaamayaasha (MA, Ichimoku, ama oscillators) laakiin ma ahan jihada qiimaha. Jaantusku wuxuu muujinayaa tusaale nooc naadir ah oo ku saabsan go'aaminta isbeddellada.
Qiimaynta xoogga isbeddelka waa inuu ahaadaa qayb ka mid ah istiraatiijiyadda dhammaan tilmaamayaasha dib u celinta iyo calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah .
Aan soo koobno .
Arimaha ugu waaweyn ee lagu garto isbadalku waxay kujiraan qaybta cilmu-nafsiga aadanaha. Hadaad fiiriso dib u noqoshada waqti aad u dheer, waxaad bilaabeysaa inaad ku aragto iyaga meesha aysan ka jirin. Yaanay suuqa ku wareerin !
Soogalootiga cusub waa inay ku bilaabaan shaqada dib u noqoshada isbedelka oo aysan ku sii wadin sii socoshada isbedelka. Laakiin wali waxaad rabtaa inaad gasho, fur booska adigoon badalin muggii horey u furmay. Xidh Khasaaraha “ugu yar” marka hore. Sidan ayaad naftaada uga ilaalinaysaa dib u dhaca yar yar .
Markaad khibrad dheeraad ah yeelato, waxaad baran doontaa inaad fahanto dhacdooyinka aasaasiga ah iyo inaad aqoonsatid dib u noqoshada dhabta ah. Kaliya kuwa sameeya suuqa ayaa og halka qiimaha uu raacayo. Laakiin ganacsiga xasilloon, waxaad ku bilaabi kartaa barta laga soo galo gudaha 20-30% ee u janjeera soo socota, iyo heerka heerka Qaadashada Macaashka (ugu yaraan 50-70 dhibcood). Codso joogsiga raadadka, haddii dhaqdhaqaaqu xoogan yahay!
Ha ku gaadhin go'aanka ku saleysan kaliya xogta "tilmaameha soo noqoshada qoraha". Falanqee xaaladda dhowr jeer oo shaandheeya calaamadaha beenta ah. Isbarbar dhig macluumaadkaaga iyo xogta tilmaamayaasha ku shaqeeya mabaadi'da kale. Kaliya falanqayntaan kadib, waad furi kartaa macaamilka.
Xusuusnow in natiijada baaritaanka kasta uu yahay mid shakhsiyadeed kuna xiran xirfadlaha iyo khibradda ganacsadaha. Tixgeli qaabkaaga ganacsiga (xoqidda ama ganacsiga muddada-dheer). Haddii aad tahay xajmiga, 10-15 horeyba waa kuu isbeddel adiga. Sida ganacsiga muddada-dheer, dhaqdhaqaaqyada noocan oo kale ah waa in aan la tixgelin iyadoon loo eegin calaamadaha binary ee bilaashka ah iyo tilmaamayaashaas. Codso tilmaamayaasha isbeddelka isbeddelka adigoon dib u cusbooneysiin !